Cabsida aragtida dadka kale
Cabsida indhaha dadka kale, cabsi soo noqnoqota inta badan. Waxaan dhamaanteen ku soo wada noolaannay xaalado murugsan! Ma rabtaa inaad talaabo ka qaado noloshaada? Mise waxaad isku muujisaa fagaaraha? Ama si fudud su’aal u weydii? Hadday ahaan lahayd ficillo yar ama weyn, baqdintani way ku soo noqon kartaa si ay kuu xannijiso oo aanad waligaa kaaga tagin
Dhibaato aad u faafa oo caalamkuna aqoonsan yahay. Waxay yeelan kartaa waxyeelo halis ah oo kaa hortaagan inaad hore u socotid, mararka qaarkood way kugu xakameyn kartaa: maxay yihiin siraha loola dagaalamo? Maxay u qaadataa in lagu guuleysto oo aad sii wadato?
Thanks to this video 2 min, waxaad fahmi doontaa sababta, dhamaadka, waxay noqon kartaa mid fudud in laga adkaado iyo horay u socdaan. Cabsida badanaa waa abuurista maskaxdeena, shucuur, sidaa darteed ka dhig inaad ka baqdid dadka kale inay u muuqdaan kuwo aan dhibsanayn.
Casharrada kuwaas oo sahlan oo sahlan in la geliyo markaad ogaato iyaga. Aqbal dariiqa ficilkan iyo furahaaga cabsida. U ogolow naftaada inaad u noqoto mid hagaagsan iyo naftaada asal ah!
Fiidiyowkani waxaad ka heli doontaa xal iyo talooyin kaa caawin doona inaad iska caabbeyso cabsida indhaha dadka kale oo noloshaadana aad u fududeeyso maalin kasta ..., iyo dhammaanba, kaliya 5 waxay tilmaamaysaa:
1) Qiyaasaha Ha marin waqti aad ku fekerayso meesha aad ku aragtay.
2)si wadajir ahé : "Adoo raba inaad ka farxiso qof walba wax badan, waxaad ku dambeysaa qof kasta oo aad ka farxiso" waa inaad doorataa!
3) Xuddunta : haddii adduunku kugu wareegsan yahay, waxaa suurtagal noqon karta ...
4) : waxay bartaan in ay dib ugu noqdaan diiqad yar.
5) Oggolaanshaha : aqbal xadaddiisa oo u dhaqaaq waddada.
Caawin qaali ah oo kaa caawin doonta nolol maalmeedkaaga. Mar dambe ma baqo, adiga
Ka Cabsida Aragtida Kale ee kale-Maxay Sartooyi u Tahay Dagaalka? Abriil 22nd, 2018Tranquillus
horeSi dhakhso ah wax u baro oo si fiican u xasuuso-Ka tag Dhamaadka Dhimashada Dhamaadka Shaqada
socdaKa dib guuldaradii ka dib